Halkee ayuu marayaa heshiiskii Barcelona iyo Man City ee ku aadanaa saxiixa Eric García?? – Gool FM
(Yurub) 21 Sebt 2020. Barcelona ayaa heshiis kama dambays ah la gaartay kooxda Manchester City, si ay ula soo saxiixato daafaca da’ada yar reer Spain ee Eric García inta lagu jiro suuqan xagaaga, sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska “Sport” ee dalka Spain.
Barcelona ayaa dooneysa inay la saxiixato 19 jirkan reer Spain ee Eric García, si ay ugu xoojisato daafaceeda dhexe, isla markaana uu u caawiyo Gerard Pique iyo Clément Lenglet.
Wargeyska “Sport” ayaa shaaca ka qaaday in kooxaha Man City iyo Barcelona ay isku raaceen in Eric García uu ugu wareego garoonka Camo Nou qiimo dhan 18 million euros, waana qiimo u wanaagsan labada dhinac, marka loo fiiriyo in qandaraaska ciyaaryahanka uu dhacayo hal sano kaddib.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in sababta aan wali loo dhamaystirin heshiiska ay tahay rabitaanka Manchester City ee ah in marka hore ay la soo saxiixato daafac cusub, kahor inta aysan u ogolaanin Eric García inuu baxo.
Dhinaca kale saraakiisha kooxda Barcelona ayaa waxay sugayaan dhameystirka heshiiska Nelson Semedo oo la filayo inuu ku biiro kooxda Wolverhampton si ay u maalgeliso. heshiiska Eric García.